I-Insole EVA Foam Printer Cartridge China Manufacturer
Incazelo:I-Sandals EVA Foam Printer XP,I-Sandals EVA Foam Printer ye-Youtube,I-Insole EVA Foam Printer APP
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta ye-Foam Foam > I-Insole EVA Foam Printer Cartridge
Umshini wokunyathelisa we-Eva Foam uthola uhlelo lokulawula ikhompiyutha yama-multi-axis. Umshini uxhumeke kukhompyutha ngekhebula le-Ethernet. Uma nje izithombe ze-design (izithombe) zifakwa kukhompyutheni, ingaphrinta kunoma iyiphi i-materail ngokuqondile.
Ezifana: i-portrait, landscape, i-oli, i-ink, i-calligraphy, imidwebo yemidwebo, njll. Umshini wokunyathelisa we-A3 ofana ne-office office printer, kulula ukusebenza, ukuma ngokushesha, ngokushesha futhi kulula. Okukhiphayo okusheshayo, okuphumelelayo, okuguquguqukayo kanye nokwenza umuntu. Akugcini nje ukukhombisa ukuthungwa kombala, umbala we-gradient, umbala wombala ophakathi, kodwa futhi ubonisa indlela ephelele yokubala kombala, umdwebo we-gradient nemiphumela yombala wokuguquka.
I-Insole EVA Foam Printer Cartridge uhlobo oluthile lokungena othintana nohlobo lwe-jet uhlobo lwezinto zokusebenza ze-digital, isisindo se-EVA Foam Printer XP isisindo esikhulu kakhulu. Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
Izici eziwusizo ze-Sandal EVA Foam Printer yethu ye- Sandals youtube RF-A3UV:
2. I- Insole EVA Foam Printer APP ingafakwa nge-Height Detecting sensor, ukuvikela ikhanda lokuphrinta;
I-Sandals EVA Foam Printer XP I-Sandals EVA Foam Printer ye-Youtube I-Insole EVA Foam Printer APP I-Sandals Eva Foam Printer Nyc I-Sandals Eva Foam Printer Amazon I-Sandals Eva Foam Paper Printer I-Sandals Eva Foam Printer Cartridge I-Sandals Eva Foam Printer ayisebenzi